King Of Fighters Boutique sacha74 0 1. Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin’ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin’ny Administrateur avy hatrany lalamasaka gmail. Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin’ny Site hampaherezana ny namana rehetra. Scannez le code QR et installez cette application directement sur votre appareil Android. Ka tao amin’ny taratasiny ho an’ny eveka rehetra Providentissimus Deus dia nanambara ny tsy maha mety diso ny Baiboly nefa nandà ny fandraisana ara-bakiteny izany toetran’ny Baiboly izany. Voaova farany tamin’ny 24 Jolay amin’ny
Téléchargement direct Télécharger cette application sur votre bureau. Voaova farany tamin’ny 24 Jolay amin’ny Lasa sekretera jeneralin’ilay vaomiera mandraka amin’ny taona i Zindani. Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy. Hita tao amin’ny » https:
Ny Baiboly sy ny Kor’any no matetika anaovan’ny mpanao heviteny fivoasana araka ny konkordisma.
Ny fivavahana bodista sy hindoa koa dia ahitana betsaka jy fivoasana ny boky masiny araka ny konkordisma. Niseho tao amin’ny tontolo kristiana tamin’ny taonjato faha ny konkordisma mba ho entin’ny mpanao heviteny manamarina ny zavatra voasoratra ao amin’ny Baiboly.
Ity dia baibboly midika fa ny fivavahana katolika dia konkordista. Olona na fikambanana sasany no fantatra fa nanao an’io fomba fivoasana ny Baiboly io. Nisy asa soratra nampiasa ny konkordisma dia nivoaka tao amin’ny tontolo katolika.
Arduin ohatra dia namoaka ny boky mitondra ny lohateny hoe La religion en face de la science: Ka tao amin’ny taratasiny ho an’ny eveka rehetra Providentissimus Deus dia nanambara ny tsy maha mety diso ny Baiboly nefa nandà ny fandraisana ara-bakiteny izany toetran’ny Baiboly izany.
Nanambara izy fa tsy afaka hifanohitra ny siansa tena izy sy ny soratra ao amin’ny Baiboly raha hazavaina tsara. Izany ihany koa no hevitr’i Tomà avy any Akino.
Famporisihana lehibe ho an’ny fandinihana ny Baiboly izany taratasin’ny Papa izany baibolt nahatonga ny mpanao fivoasana hampifanaraka izay voalazan’ny Baiboly amin’ny fahitana zava-baovao ataon’ireo manam-pahaizana siantifika tamin’ny fotoanandrony. Tsy dia tena asa soratra misy ady hevitra ny ao fa andrana konkordisma izay nampifanarahina tamin’ny fahalalana siantifikan’izany andro izany. Ny konkordisma silamo dia fihetsiketsehana izay mikendry ny hanaporofo ara-tsiansa fa avy amin’Andriamanitra ny fivavahana silamo.
Ny konkordisma silamo dia fantatra koa amin’ny hoe Fahagagana siantifikan’ny Kor’any na Fahagagana siantifikan’ny Sonà na Fahamarinana siantifikan’ny Kor’any na Fahamarinana sianifikan’ny Sonà. Marihina fa tsy ny Silamo rehetra akory no mpomba ny konkordisma. Ny voalohany nandray anjara tamin’io konkordisma silamo io dia ny mpitsabo fratsay Maurice Bucaille izay namoaka boky tamin’ny taona mitondra ny lohateny hoe La Bible, le Coran et la Science « Ny Baiboly sy ny Kor’any ary ny Siansa » .
Nisy vokany lehibe teo amin’ireo olo-manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolo arabo sy miozolmana ny asa sorany, indrindra ilay jeologa ejipsiana atao hoe Zaghloul El-Naggar sy ny mpiara-miasa aminy dia i Abdul Majeed Zindani izay Iemenita karismatika.
Azo jerena na vakina amin’ny tranon-kala mivoy an’io hevitra io izay manambara ny fitiavan’ny mpino silamo maro azy eo amin’ny tontolo silamo izany . Ny sarimihetsika video miely indrindra  dia ny Ceci est la vérité « Ny marina ity » izay navoaka an-kasety maro sady ahitana an’i Zindani mampiresaka Siantifika tsy silamo. Eo amin’ny tontolo silamo miteny frantsay, ny tsikera mafy indrindra dia ny nataon’ilay asrofizisiana Nidhal Guessoum izay milaza fa manao « bricolages scintifiques » « fanefitefena siantifika » ireo mpiaro ara-tsiasa ny finoana silamo, sady milaza fa ny fahalalana siantifikan’izy ireo dia ivelambelany fotsiny sy tsy ampy ary diso na lany andro, ary ny fanaovany hevi-teny ny andininy ao amin’ny Kor’any dia entina hanohanana firehana sady noterena fotsiny .
Tamin’ny taona ny Wall Street Journal dia namoaka lahatsora-panadihadiana momba ny fampiresahana an-kaino aman-jery ireo siantifika navoaka ho fantatry ny rehetra avy ao amin’ireo valandresaka iraisam-pirenena nampanaovin’ny Commission sur les Signes Scientifiques dans le Coran et la Sunna. Izany fanadihadiana izany dia mitondra ny lohateny hoe Western Scholars Play Key Role In Touting « Science » of the Quran ka mitsikera mafy dia mafy an’i Zindani sy ny tsy fanajana ny tsy fiandaniana siantifika ary ny fanomezana tombontsoa be mialoha ireo siantifika handray anjara amin’ny valandresaka .
Hita tao amin’ny » https: Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara. Fikambanana Toerana iraisana Toerana iombonana Non-malagasy speakers. Fanoroana sy fitsipika Renipejy Fototra dimy Fanamboarana takelaka. Amin’ny tenim-pirenena hafa Français Hanova ny rohy. Voaova farany tamin’ny 24 Jolay amin’ny Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany.